Bank of America shatiyada blockchain qalab ammaanka
Bank of America ayaa ku guuleystay a “ammaanka iyo asturnaanta macluumaadka patent” sida ay macay Maraykanka iyo Xafiiska Astaanta, si ay u xakameeyaan helaan dhinacyada qaar ka mid ah a network blockchain permissioned.
Baanka ayaa sharaxay:
“baahida loo qabo A ka jira si ay u bixiyaan hay'adaha / users loogu talagalay awood u leh inay diyaar tilmaamaan carqaladaha hortaagan in la xiriira u isticmaala loogu talagalay’ dareen, oo mar blocks la aqoonsaday, Tilmaamo ammaanka in la hubiyo in loo qoondeeyey hay'adaha / user in ay helaan blocks yihiin, dhab ahaan, dadka isticmaala idman.”
Ruush State Duma ansixiyay biilka warshadaha crypto
Baarlamaanka Russia ee, Duma Gobolka, ayaa ansixiyay sharciyo cusub sharciyeynta warshadaha crypto ah. Sharciyada ku qeexaan cryptocurrencies iyo calaamadihii sida hantida, iyo wixiise caddaymaha la dhaqanka crypto iyo teknoolajiyada blockchain la xiriira.
410 xigeenadiisa ansixiyay biilka dhegeysiga, iyada oo keliya mid ka mid codbixinta waxa ka dhanka ah.
Sharciga ayaa "On Digital Hantida Financial" ayaa hoos tixgelin tan iyo sanadkii la soo dhaafay la dambays ah kama dambaysta ah ee 1-da July, heshiisyo la cryptocurrencies, iyo sidoo kale teknoolajiyada blockchain la xiriira sida qandaraasyada smart, iyo macdanta.
CFTC arrimaha Hanuun u ah shirkadaha bixiya taagayo cryptocurrency
xoreeyo The. Badeecadda Futures Commission Trading (CFTC) ayaa sii daayay Hanuun cusub is dhaafsi qorsheyneysa inay taxaan waxyaabaha derivative cryptocurrency la xiriira.
Waxaa la qorsheeyay in uu caawiyo ka qaybgalayaasha suuqa sameeyaan barnaamijyo maaraynta khatarta leh “Hufnaan sharciyeed” on “meelaha muhiimka ah ee u baahan fiiro gaar ah” sida sida loo "raaco geedi socodka maamul ku haboon marka la eego olole caalami ah oo wax soo saarka, kuwaas oo,” sida uu sheegay agaasimaha DCR Brian Bussey.
Islands Marshall mari qaadashada sharciga crypto ay lacagta qaranka
Ay cryptocurrency cusub waxaa lagu magacaabaa ahu wuxuu (SOV) oo ka dhici doona ee USD sida lacagta qaranka kaliya.
Lacagta cusub ee uu noqon doono mid dhaylo rasmiga sharciyeed ee ganacsiga iyo 53,000 muwaadiniinta Islands Marshall – waddan waddan madax bannaan iyo xubnaha ka ah QM.
Tani waa cryptocurrency ugu horeysay ee kaliya Qaranimo saxiixay sharciga iyo waa weyn, maxaa yeelay, (in aragtida ugu yaraan) waxaa loola jeedaa in hay'adaha maaliyadeed sida bangiyada iyo Visa yeelan doonaan in ay aqbalaan SOV sida ay hadda tahay mid curdan sharciga ah ee dal madax-bannaan.
waa Seeraar Core maxay iyo waxa ay samaynayaan,
macaamiisha ugu weyn ee ...
saddexaad Jarmal kasta aragto cryptocurrencies sidii maalgashi
Inkastoo Seeraar, Oo ...